ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းပေါ် ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်နှင့် YBS တိုက်မိပြီး ဓာတ်တိုင်ကို ထပ်တိုက် - Yangon Media Group
ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းပေါ် ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်နှင့် YBS တိုက်မိပြီး ဓာတ်တိုင်ကို ထပ်တိုက်
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၂၄
ကမ္ဘာ့အေး ဘုရားလမ်းပေါ်တွင် စည်ပင်အရာရှိ မောင်းလာသည့် ကိုယ်ပိုင်ကားနှင့် YBS ယာဉ်တိုက်မိပြီး အရှိန်ဖြင့် ဓာတ်တိုင်အားထပ်မံတိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ကမ္ဘာ့အေး ဘုရားလမ်းအတိုင်း တောင်မှမြောက်သို့ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် (၁) ရပ်ကွက်နေ စည်ပင်ရေသန့်ဌာန (မရမ်းကုန်း)မှ ယာဉ်မောင်း ဦးသန်းဦး (၄၄)နှစ် မောင်းနှင်လာသော ဆက်စိခဲရောင် ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်သည် မရမ်း ကုန်းမြို့နယ် သာသနာရေးရုံးဝင် /ထွက်ပေါက်ရှေ့အရောက် ဝဲဘက် ချိုးကွေ့စဉ် မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ မရမ်း ကုန်းမြို့နယ် (၁)ရပ်ကွက်နေ ယာဉ် မောင်း ဦးစိုးသန်းခိုင်(၄၇)နှစ် မောင်း နှင်လာသည့် YBS-36 ယာဉ်က တိုက်မိပြီးနောက် ယာဘက်ပလက် ဖောင်းပေါ်ရှိ ဓာတ်မီးတိုင်အား ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်က ထပ်မံထပ်မံတိုက်မိ သဖြင့် ယာဉ်နှစ်စီးနှင့်ဓာတ်မီးတိုင် ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း အမှတ်(၂)ယာဉ် ထိန်းရဲ တပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံးထံမှ သိရ သည်။
ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်မောင်း ဦးသန်းဦးမှာ ဒဏ် ရာများရရှိကာ မြောက်ဥက္ကလာပ ဆေးရုံကြီးတွင် အတွင်းလူနာအဖြစ် ဆေးကုသမှုခံယူနေကြောင်း အမှတ် (၂) ယာဉ်ထိန်းရဲ တပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံးထံမှ သိရသည်။ ယာဉ်တိုက်မှုတွင် ဆက်စိ ခဲရောင်ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်မှာ ကျပ် သိန်း ၃ဝ ခန့်၊ YBS-36 ယာဉ်မှာ ကျပ်ငါးသိန်းခန့်နှင့် ဓာတ်တိုင်ကျိုး ပျက်စီးမှုတန်ဖိုးမှာ ကျပ်သုံးသိန်း ခန့်ရှိကြောင်း အမှတ်(၂) ယာဉ်ထိန်း ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံးထံမှ သိရသည်။
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ယာဉ်မှုစစ် ဒုရဲအုပ်သန်းဦးက ”ဆက်စီခဲရောင် ယာဉ်က ဂန္ဓမာလမ်းဘက်လာတယ်။ လာပြီးတော့ သာသနာရေးရုံးထဲကို ဝင်တာ။ ဝင်တဲ့အခါကျတော့ YBS က အောက်ဆုံးယာဉ်ကြောက မောင်းလာပြီးတော့ ဆက်စိကားရဲ့ဘေးကို တိုက်လိုက်တာ။ ဘေးကိုတိုက်တော့ ပလက်ဖောင်း ပ်ါရောက်ပြီးတော့မှ ဓာတ်တိုင်ကို ထပ်တိုက်တာ။ တိုက်လိုက် တော့ အဲ့နားမှာ ဖုန်တွေပါထသွား တယ်။ ဓာတ်မီးတိုင်ကတော့ ကျိုးသွားတယ်။ လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက် မှုတွေတော့ မရှိပါဘူး။ သူက လုံးလုံးလျားလျား လဲသွားတာမဟုတ်ဘူးလေ။ အောက်ခြေကို တိုက်လိုက်တာဆိုတော့ အပေါ်မှာ ဓာတ် ကြိုးတွေက အဲ့တိုင်းပဲ။ ဆက်စီး ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်ကတော့ တော်တော် ပျက်စီးသွားတယ်။ ဆက်စီကိုယ်ပိုင် ယာဉ်မောင်းက စည်ပင်ကအရာရှိတစ်ဦးပဲ။ သူ့အခြေအနေကတော့ သိပ်စိုးရိမ်စရာတော့ မရှိပါဘူး” ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
ယာဉ်မရှင်းဘဲ ချိုးကွေ့သည့်အတွက် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခြင်း ဖြစ်သဖြင့် ဆက်စီကိုယ်ပိုင်ယာဉ် မောင်းကို အရေးယူထားကြောင်း ရင်းကဆက်လက်ပြောသည်။ ယင်းယာဉ်တိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး မရမ်းကုန်းမြို့မရဲစခန်းမှ ယာဉ်(ပ)၂၂/၂ဝ၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ-၂၇၉/၃၃၈ ဖြင့် ဆက်စိ ခဲရောင် ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်မောင်း ဦးသန်းဦးကို အမှုဖွင့်ထားသည်။
(၂၃၄) ကြိမ်မြောက်အဖြစ် ဥာဏ်တော်အမြင့်၂၅ ပေရှိ မဟာဝါဠုက သဲပုံစေတီတော် နေ့ချင်းပြီး တည်ထားပူေ
ထန်တလန်မြို့၌ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ် စိုက်ထူမည့်ကိစ္စကို အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းအချို့ ကန့်ကွက်မှု ရ
နိုင်ငံတော်မှ ပေးမည့် ပင်စင်ကို စိတ်မဝင်စား၊ ပိုင်ဆိုင်မှု အိတ်ပိတ်စာကို ပြန်ယူမည် မဟုတ်ဘဲ ?
တိုင်းပြည်ပေါ်ထားသည့် သစ္စာတရား၊ လုပ်အားနှင့် စေတနာချင်းပြိုင်မည်ဟု ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဥက္က?
စောင့်ကြည့်ရတော့မယ့် မော်ရင်ဟို ရဲ့ တတိယရာသီ
ဝက်ဖို့ဒ်နည်းပြ မာကိုဆေးဗားကို ကမ်းလှမ်းခဲ့သော်လည်း အဲဗာတန်အသင်း ငြင်းပယ်ခံရ
” Album လေးထွက်ပြီး အခြေခိုင်တော့မှ ရုပ်ရှင်လောကကို ဝင်မယ်” ချမ်း မြေ့ မောင် ချို